अभिषेक बिना बाच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी करिश्मा किन बनिनन् बच्चन परिवारको बुहारी ? – Khabaarpati
March 8, 2021 March 8, 2021 goodmamLeaveaComment on अभिषेक बिना बाच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी करिश्मा किन बनिनन् बच्चन परिवारको बुहारी ?
तर, जति नै आलोचित भए पनि उनलाई लिएर फिल्म निर्माण गर्ने निर्माताहरुको लाइन लागेको थियो । सन् १९९२ मा उनको ६ वटा फिल्म रिलिज भएको थियो । करिश्माको दोस्रो फिल्म पुलिस अफिसर रहेको थियो । उक्त फिल्ममा ज्याकी श्राफ नायकको भुमिका रहेका थिए । उनकै अंकल ऋषि कपुरले ज्याकी उनको अंकल झै देखिएको बताएका थिए ।
सन् १९९४ मा आएको फिल्म राजा बाबुमा करिश्मा र गोविन्दाको भुमिका धेरैले मनपराए । उनले त्यसपछि सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, सन्नी देवल, अजय देवगनसँग काम गरिन् ।करिश्माको धेरै अभिनेतासँग अफयेरको हल्ला पनि चलेको थियो । तर, उनले यसबारे केही बोलिनन् । सन् २००२ मा उनको विवाह अभिषेक बच्चनसँग हुने लगभग पक्का भएको थियो । तर, विवाह आटेको केही दिनमा नै इनगेजमेन्ट टुटेको थियो ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार अभिषेकसँग करिश्माकी आमाले कति कमाउँछौँ भनेर प्रश्न गरेपछि बच्चन परिवार रिसाएको थियो । अन्ततः विवाह हुने लागेको सम्बन्ध पनि टुट्यो । सन् २००३ मा उनको विवाह उद्योगपछि संजय कपुरसँग भएको थियो । उनको दुई सन्तान पनि भए । तर, सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेन । सन् २०१६ मा उनीहरुले डिभोर्स गरे ।
January 29, 2021 January 29, 2021 goodmam
October 3, 2020 October 3, 2020 goodmam